Ambohitsilaozana: fambolena tsy misy akora simika | NewsMada
Ambohitsilaozana: fambolena tsy misy akora simika
Nampiharina any amin’ny kaominina Ambohitsilaozana, distrikan’Ambatondrazaka, ny teknika fambolena hialana miandalana amin’ny fampiasana akora simika (agro-écologique). Tafiditra ao anatin’ny tetikasa fanatsarana ny vokatry ny fambolena (Papam)* izany, iarahana amina vondrona sy fikambanana mpikaroka maromaro (GSDM)*. Fifanakalozana traikefa momba izany ny « Vala tahaka », velaran-tany anaovana ny fambolena.
Tsy voafetra ny velaran-tany fa izay ananan’ny tantsaha ihany no ezahina volena hamokarana betsaka sy tsara kalitao. Teknika mivelatra ny tsy fampiasana akora simika sady fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny fahasalamana. Azo anaovana izany ny fiompiana, ny fambolen-kazo, ny voly avotra, ny zezi-pahitra, sns. Ahitan’ny tantsaha tombony ny fanaovana azy, araka ny fanadihadiana nataon’ireo mpikaroka ao amin’ny GSDM. Samy manamarina izany izay mpamboly nanontaniana: mitombo sy mihatsara ny vokatra.
Anisan’ny manohana ny tetikasa ny AFD (Agence française de développement) mahita sy mahatsapa ny fahavoazana mahazo ny tantsaha sy ny fiantraikany eo amin’ny toekarem-pirenena: tsy ampy ny vokatra, raha tsy hilaza afa-tsy ny vary, voatery manafatra isan-taona. Mbola ny vahiny ihany eto, ny Frantsay, ny mamatsy vola ho fampandrosoana ny fambolena, toy Bad manajary ny lemaka Bas Mangoky.
Papam* : Projet amélioration de la productivité agricole à Madagascar
GSDM* : Groupement semis direct Madagascar